Sarjaawwan kuusaa deetaa
Dirreewwan kuusaa deetaa mara sanduuqa tarree Sarjaa gabatee(wwan) Dirreen haqame gara galmeetti hin saagamne.
Dirreewwan kuusaa deetaa mara sanduuqa tarree Sarjaa gabatee(s) haqa.
Dhangii gara dirreewwan kuusaa deetaatti gara galmetti saagame.
Kuusaa deeetaa irraa
Dhangiiwwan kuusaa deetaa fudhata.
Mataduree gabatee saagi
Maqaa tarjaa fayyadami
Tarree qofa uumi
Title is: Gabatee